Man City Oo Xaalada Kusii Hurisay Mikel Arteta.
HomeHoryaalka IngiriiskaMan city oo xaalada kusii hurisay Mikel Arteta.
December 23, 2020 Horyaalka Ingiriiska, Wararka Ciyaaraha Maanta 0
Tababaraha kooxda Arsenal ee laga yaabo in shaqada laga cayriyo Maalmaha ama saacadaha soo aadan Arteta ayaa qirtay in kooxdiisu ay ku jirto dhibaato weyn haddii ay ka celin waayaan qaab ciyaareedka liita ay ku jirto.
Gunners ayaa laga badiyay seddex ka mid ah afartii kulan ee ugu danbeysay iyadoo cadaadiska uu kusii laba kacleeyey Tababaraha Arsenal Mikel Arteta ayaa qirtay in kooxdiisa ay ku jirto “dhibaato weyn” hadii aysan si dhaqso ah wax uga rogin, ka dib markii qaab ciyaareedkoodii xumaa ay sii waday guuldaradii ka soo gaartay Manchester City.
Gunners ayaa gashay qeybtii nasashada ee talaadadii Carabao Cup wareega quarter-finalka iyadoo ay ku kala baxeen min hal gool, laakiin City ayaa dhalisay seddex gool qeybtii labaad ee ciyaarta taasoo u horseeday guul raaxo leh oo 4-1 ah. Guuldarro kasoo gaarta City ayaa sii wadata rikoor xun oo ay u baahan tahay Gunners, kuwaasoo si gaar ah ugu xumaa horyaalka, halkaasoo ay fadhiyaan kaalinta 15aad.